“Ma Rumeysni In Darbi Uu Joojin Karo Cadaawadda Al-Shabaab”, Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Dayrka Kenya Iskaga Xidhay Somalia | Duul News International
“Ma Rumeysni In Darbi Uu Joojin Karo Cadaawadda Al-Shabaab”, Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Dayrka Kenya Iskaga Xidhay Somalia	(Duulnews)-Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay inaanay Kenya wax wada hadal ah kala yeelan Dayrka ay iskaga xidhayso Somalia si ay Al-shabaab iskaga xannibto.
Waxa uu ka digay inaanay Kenya AL-shabaab ku xakamayn Karin Darbi la dhiso, isagoo sidoo kalena sheegay inaanu aaminsanayn in Dadka Kenya ka gaysta Weeraradu ka yimaadaan Somalia, isagoo meesha ka saaray inay kuwa weerarada gaystaa Xeryaha Qaxoontiga ka yimaadan “Mid ka mid ah dadkii ka fuliyay weerarka Jaamacadda Gaarisa waxaa dhalay sarkaal Keenyaati ah; taasina waxay tusaale u tahay inaanu ahayn qof ka yimid xeryaha ku yaalla Dhadhaab. Anigu ma aaminsani inay xidhiidh leeyihiin qoxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Dhadhaab iyo argagaxisadaa.”ayuu sheegay Xasan Sheekh oo VOA-da la hadlayay
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay inaan Al-shabaab lagu joojin Karin darbi Kenya dhisato balse ay u baahan tahay in fikraddeeda lala dagaalamo.
“Annagu waxaan la dagaalamaynaa fikirka Xarakada Al-shabaab. Qorsahaha ugu weyn ee aan wadanana ma aha mid milateri oo keliya. Marka darbi la dhiso ma celin karo fikirka Al-shabaab. Sidaa awgeed xukuumadda Kenya si cad nooguma sheegin qorshahan, balse hadii ay sameynayaana, waxaan la wadaagi doonnaa waayo-aragnimadeeda ku saabsan arrintan. Mana rumeysanin in darbi uu joojin karo cadaawadda Al-shabaab”,ayuu Xasan Sheekh Sheegay.
Dawladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay Xuduudka ay Somalia la wadaagto ka binaynayso dayr looga dan leeyahay in Al-shabaab lagaga joojiyo weerarada ay Kenya ka gaysanayso.